Kolombiya - Dhammaan sababaha booqashada dalkan | Safarka Absolut
Kolombiya waa wadan ku yaal waqooyiga-galbeed qaybta koonfurta Ameerika. Caasimadiisu waa Bogotá waana badanaa barta ugu horeysa ee la booqdo. Dhexdeeda waxaan ku booqan karnaa xarunta taariikhiga ah, kori karnaa Cerro de Montserrate, waxaan ku tallaabsaneynaa Plaza de Bolívar ama waxaan ku raaxeysaneynaa matxafyadeeda.
In kasta oo mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee aan ka heli doonno Kolombiya ay ku taal magaca Barichara, oo leh deegaan gebi ahaanba dabiici ah oo u dhexeeya buuraha, oo leh jidad cidhiidhi ah. Dabcan, ma iloobi karno magaalada deyrka leh ee Cartagena de Indias, oo leh dhismooyin gumeysi iyo sidoo kale waddooyin ka samaysan dhagxaanta dhagxaanta.
Joogsiga kale waa Medellín, oo aan ku booqan doono xarunteeda iyo Plaza Botero. Halkaas waxaad ku arki doontaa Qasriga Dhaqanka iyo Matxafyadooda. Adigoon ilaawin Basilica-ka Marwadayada Candelaria. Ku darida taabashada midabka, waxaan leenahay magaalo kale oo la yiraahdo Guatapé, oo ku taal meel u dhow kaydka macmalka ah.
Aagga loo yaqaan Eje Cafetero sidoo kale yaan laga tagin. muuqaallo fara badan oo ay weheliso magaalooyin wax badan laga bixiyo sida Salento ama Filandia iyo Manizales. Qeybtan dambe waxaad ku raaxeysan kartaa Daarta Qubrus waxaadna ka kori kartaa Cathedral, halkaas oo aad ka heli doontid aragtida dusha sare ee ugu fiican.
by Daniel samee Bilaha 3 .
Novena de Aguinaldos waa mid ka mid ah dhaqamada Kirismaska ​​ee ugu muhiimsan uguna qoto dheer. Sidoo kale waa very
Shaki la'aan laxanka muusikada ee aadka ugu xiran Kolombiya, dhaqankeeda iyo dadkeeda, waa cumbia. Ma jiraan…
Khabiirada qurxinta iyo dabeecadaha jecel adduunka oo idil waxay u safreen Koonfurta Ameerika tobanaan sano ...
by maruuzen samee Bilaha 3 .
Latin America waxay leedahay meelo cajaa'ib leh, Kolombiya waxay xooga saareysaa meelaha ugu wanaagsan. Tusaale ahaan, Popayán, oo ka mid ah kuwa ugu ...
Alejandro Obregón waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah rinjiyeyaashii waaweynaa ee Isbaanishka ahaa ee qarnigii XNUMXaad. Abuuritaankiisa muddo dheer ayaa lagu amaanay ...
Waxaan u safarnay koonfurta Kolombiya, gaar ahaan Waaxda Putumayo, si aan ula kulano mid ka mid ah meelaha ugu sixirka badan ...
by Isabella samee Bilaha 7 .
Mid ka mid ah dhinacyada ka yaabiya dadka safarka ah ee booqda Kolombiya markii ugu horreysay waa mid isku mid ah ...
by Absolut Kolombiya samee Bilaha 7 .
Dal waliba wuxuu leeyahay khamri ama cabitaan qaran oo u gaar ah. Ta Colombia waa calaamadda, shaki la'aan cabitaanka khamriga ...
by Daniel samee Bilaha 7 .
Mid ka mid ah khasnadaha waaweyn ee ilbaxnimadii hore ee Columbian-ka ee Kolombiya ayaa laga helay Tierradentro National Archaeological Park….
Buundada cajiibka ah ee is jecel ee u dhaxeysa Providencia iyo Santa Catalina
Waxaa jira sababo badan oo loo booqdo jasiiradaha San Andrés, Providencia iyo Santa Catalina, oo ah meel jannada loogu talagalay ee biyaha ...
Kondhiga Andes, shimbir qaran
Condor-ka Andes waa mid ka mid ah xayawaannada astaanta u ah Koonfurta Ameerika. Shimbirtan sharafta badan ayaa ...
The Cordilleras ee Kolombiya
Magaalooyinka waaweyn ee Kolombiya